Nokia 9 PureView: Nkọwapụta, Ahịa na Ntọhapụ | Gam akporosis
Nokia 9 PureView: Smartphone nwere ese foto azụ ise bụ gọọmentị
Nokia bụ akara ọzọ nke nwere mmemme ngosi na MWC 2019. Izu ole na ole gara aga ka akwadoro ya ọnụnọ ya na ihe omume na Barcelona. Otu n'ime ngwaọrụ ndị kachasị atụ anya na mmemme a bụ Nokia 9 PureView, a na-atụ anya ịdị elu nke ika ahụ, nke pụtara maka ese foto azụ ya ise. Ekwentị nwere nsogbu ọtụtụ ntapu nso nso a.
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ịmata nke a ngwaọrụ ama eze na nke a mbipụta nke MWC. Nokia 9 PureView bụ ama ama ama maka ama ama, nke na-acho inwe otu oganihu di elu di elu nke ha na enwe rue ugbua. Ekele ya, ha so n'ime ụdị ise kacha ere ahịa n'ọtụtụ ahịa.
Ọ bụ ihe nlereanya ahụhụ ọtụtụ igbu oge na mbido ya. Ruo ọnwa ole na ole, ekwuru na ọ ga-abata na Jenụwarị, ọ bụ ezie na akara ahụ mechara họrọ ịhapụ anyị na ngwaọrụ a na MWC 2019. Otu ụbọchị nke mechara rute na nke ga-enwe ike ịmata ama a, ya na igwefoto azụ ya ise. Nke mbụ ụdị na ahịa.
1 Nkọwa Nokia 9 PureView
2 Nokia 9 PureView: Bet na foto
3 Dị ọcha gam akporo ọzọ
Nkọwa Nokia 9 PureView
Akara ahụ na-ahapụ anyị nnukwu mkpa dị mkpa. Na ụdị ndị gara aga na nke a, igwefoto bụ ihe dara ada ma mepụta nkatọ sitere na ndị ọrụ. N'ihi na, Nokia tinyesiri ike na igwefoto ndị a, nke amaliteghachiri na ZEISS. Ọ bụ ezie na a na-atụ anya ọtụtụ mmelite n'aka ha. Hà ga-emezu ihe a tụrụ anya ka ha mee?
Maka ugbu a, anyị ga-ahapụrụ gị mbụ na nkọwa zuru ezu banyere Nokia 9 PureView a na emeputara akara a na MWC 2019.
Nka na ụzụ nkọwa Nokia 9 PureView
Nlereanya 9 Dị Ọcha
Usoro njikwa A gam akporo 9.0 achịcha (gam akporo Otu)
Ihuenyo 5.99 sentimita asatọ AMOLED na mkpebi nke 1440 x 2960 pikselụ na a ruru 18.5: 9
Nhazi Qualcomm Snapdragon 845 octa-isi
Nchekwa n'ime 128 GB (Gbasaa na microSD ruo 512 GB)
Igwefoto na-aga n'ihu 12 MP RGB f / 1.8 +12 MP RGB f / 1.8 + 12 MP BN f / 1.8 + 12 MP BN f / 1.8 + 12 MP BN f / 1.8
Igwe n'ihu 20 MP
Njikọ WiFi 802.11 A / C Bluetooth 5.0 A-GPS GLONASS USB 3.1 -dị-C
Atụmatụ ndị ọzọ NFC mkpisiaka ihe mmetụta n'okpuru ihuenyo IP67
Batrị 3.320 mAh na ngwa ngwa
Akụkụ X x 155 75 7.9 mm
Ahịa 699 dollar
Ngwakọta nke igwefoto dị mkpa na ngwaọrụ a. N'okwu a, na Nokia 9 PureView a anyị hụrụ kamera agba abụọ, monochrome atọ, ọkụ na ihe omimi. Ngwakọta dị mma nke ọ ga-ekwe omume ịme foto dị ukwuu n'ụdị ọnọdụ niile.
Anyị bụ ndị n'ihu ụwa mbụ ama nwere ese foto azụ ise. Dị ahụ dị n'ihu ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị ka Samsung, nke ahọrọla ihe ntanetị anọ na ụfọdụ ngwaọrụ ha. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ nzọ doro anya n'akụkụ nke ụlọ ọrụ ahụ iji jiri ngwaọrụ a laghachi n'elu.
Nokia 9 PureView: Bet na foto
Dị ka a tụlere maka ọnwa ole na ole, ngwaọrụ ahụ abịa na a mgbawa na e mere site Ìhè. Ọ nwere ike ịchịkwa ihe mmetụta ekwentị ọ bụla n'adabereghị. Ke adianade do, ọ na-enye ohere ụfọdụ usoro a ga-rụrụ ke ukem na ekwentị processor. Onye nhazi ihe bụ Snapdragon 845, nke dị ike, abụghị nke kachasị ọhụrụ. Achọpụtala na nke a ga - abụ nhazi nke Nokia 9 PureView, ihe ọtụtụ na - amasịghị.
Ọ bụ ezie na Light na-eje ozi dị ka ngalaba-nhazi. Ya mere, ọ ga-ekwe omume na nchikota n'etiti ha abụọ na-enye ohere inweta nnukwu arụmọrụ na ngwaọrụ ahụ. Onye ọ bụla nke ama sensọ nwere ọrụ a kapịrị ọnụ. Anyị ekwuola nkesa ahụ, ya mere, o doro anya ihe a ga-eji nke ọ bụla mee. Otu ihe dị na njirimara ekwentị bụ na ị nwere ike ịse foto ojii na oji na ọkwa dị iche na nkọwa zuru oke. Ọzọkwa ogologo gbaa gbaa, ruo iri sekọnd.
Nokia 9 PureView a nwere ike mepụta foto nke ruru 60pipixels ekele igwefoto ndị a. Na mgbakwunye, anyị na-achọta ọgụgụ isi na igwe na-amụta na ngwaọrụ ahụ, nke na-enye anyị ohere ịmepụta ihe dị 1.200 miri emi. N'ileghachi anya na njirimara nke igwefoto ndị a, ihe niile na-egosi na anyị na-eche ihu ekwentị kachasị mma na ahịa na mpaghara a. Naanị ihe ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ugbu a.
Dị ọcha gam akporo ọzọ
Dị ka ọ dị na smartphones nke ika ahụ, anyị na-ahụ Pure gam akporo, na-enweghị oyi akwa ọ bụla nke nhazi n'ime ya. Nokia 9 PureView biara A gam akporo Otu, na mbipute 9.0 achịcha ya. Yabụ ndị ọrụ nwere ike ịnụ ụtọ ụdị nke sistemụ arụmọrụ kachasị ọhụrụ na ngwaọrụ ahụ. Dị ahụ na-abụ otu n'ime ndị nkwalite ukwu nke gam akporo One.
Na mgbakwunye, ọnụnọ nke Ihe ntinye IP67 maka iguzogide mmiri na ihe nlereanya a. N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ ihe mkpịsị aka mkpịsị aka abanye na ihuenyo ahụ, ebe anyị na-ahụ n'ọtụtụ ụdị n'ime oke gam akporo dị elu. Anyị nwekwara ihu ihu na ngwaọrụ ahụ.
Ozugbo amaara ihe niile banyere ama ama a, ihe fọdụrụ bụ ịma kedu mgbe anyị ga-atụ anya na a ga-ebupụta ya re ahịa Nokia 9 PureView a. Luckily, na ngosi nke otu anyị na-enwetakwa a data. Ya mere, anyị maara nke a, na mgbakwunye na ire ere ya.
Maka oge ahụ nkwenye nke ngwaọrụ ahụ na United States ekwenyela na ọnwa Machị. Anyị maara na ọ ga-abịarukwa Europe, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ ekwughị ihe ọ bụla banyere ụbọchị ọ ga-ekwe omume ịbata na Europe. Ma n'ezie ọ ga-abụ n'oge opupu ihe ubi kwa. Ya mere, anyị ga-echere ka e nyekwuo akụkọ na nke a.
Banyere ọnụahịa, na mbido ya na United States, Nokia 9 PureView a ga - abia na onu ahia nke dolla 699. Anyị amaghị ọnụahịa ọ ga-enwe na Europe. Ọ bụ ezie na ihe niile na-egosi na ọ ga-adị elu, mana enweghị ihe data doro anya na nke a n'oge a. Anyị na-atụ anya ịnụ gị n'oge na-adịghị anya. Banyere agba, ugbu a ọ ga-ekwe omume ịhụ ekwentị na-acha anụnụ anụnụ. Anyị amaghị ma a ga-enwe ụcha ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nokia 9 PureView: Smartphone nwere ese foto azụ ise bụ gọọmentị
Nokia gosipụtara ekwentị ọhụrụ ya na MWC 2019
Huawei Mate X: Ekwentị mpịachi Huawei na-arụ ọrụ